Amathrendi nokuseshwa kwama-athikili endabeni:ezempilo
Funda kabanzi ngokufakwa okufakwa emadolweni, ukuhlukahluka kobulili nokuningi
Namuhla akukho kushoda kwabakhiqizi bamadolo okufakelwa emadolweni. Kubalulekile ukukhetha idivaysi engcono kakhulu kuwe nesimo sakho. Ngenkathi ukufakelwa ngakunye kunikeza umsebenzi ofanayo oyisisekelo - ukufaka ithambo lakho eligulayo nokuqeda izici ezithile zobuhlungu kuzihlukanisa. Abakhiqizi b
Ukuhlinzwa kokubuyekezwa kwamadolo okusebenza ngamadolo: okudingeka ukwazi
Yize izimila zanamuhla zenzelwe ukuhlala iminyaka eminingi, kungenzeka ukuthi wabelane ngePinterest Lapho ukufaka idolo kungasasebenzi kahle, ukuhlinzeka ngokubuyekeza kuyadingeka. Phakathi nale nqubo, udokotela ohlinzayo ufaka into entsha esikhundleni sedivayisi endala. Ukuhlinzeka ngokubuyekeza ak
Siyini isilinganiso sakho senhliziyo esifanele?
Yabelana ku-Pinterest Isilinganiso senhliziyo yinombolo yezikhathi inhliziyo yakho eshaya ngayo ngomzuzu. Ungayilinganisela ekuphumuleni (ukuphumula kwenhliziyo) nangesikhathi sokuvivinya umzimba (ukuqeqesha ukushaya kwenhliziyo). Ukushaya kwenhliziyo yakho ngesinye sezinkomba ezinokwethenjelwa kakh
I-myocarditis: izimpawu, ukwelashwa nokuxilongwa
I-Myocarditis yisifo esivezwa ukuvuvukala kwemisipha yenhliziyo eyaziwa ngokuthi i-myocardium - ungqimba lwemisipha yodonga lwenhliziyo. Le misipha inesibopho sokuthola inkontileka nokuphumuza ukupompa igazi ngaphakathi nangaphandle kwenhliziyo lize liye emzimbeni wonke. Lapho le misipha ivuvuka, ik
Ukwelashwa kwe-PSA eqinile: umhlahlandlela wengxoxo kadokotela
Ukuqonda i-PsA Psoriatic arthritis (PsA) kuyindlela engapheli yokuvuvukala kwesifo samathambo. Ikhula emajoyintini amakhulu abanye abantu abane-psoriasis. Eqinisweni, abantu abafinyelela kumaphesenti angama-30 abane-psoriasis bahlakulela i-PsA. Kuyasiza nodokotela ukuthi bakunikeze umuthi ofanele. I